सकभर खाँदै नखानुहोस् यी ९ खानेकुरा तपाइको तालु खुईलिन्छ ! जनचेतनाको लागी भएकोले सबैलाई सेयर गर्नुहोला – च्यालेन्ज नेपाल
December 22, 2020 January 26, 2021 challengenepalLeaveaComment on सकभर खाँदै नखानुहोस् यी ९ खानेकुरा तपाइको तालु खुईलिन्छ ! जनचेतनाको लागी भएकोले सबैलाई सेयर गर्नुहोला
अचेल धेरै मानिस एउटा साझा समस्याबाट ग्रसित छन् । त्यो हो – तालु खुइलिनु । बुढापाकाको त कुरै छाडौँ भर्खरका तन्नेरीहरुको समेत तालु खुईलेको हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ – तालु खुईलिनु पनि एउटा रोग हो । कतिपयले तालु खुइलिनुलाई बुद्धि र विवेकको क्षमतासँग दाँज्ने गरेका छन् । तर, यो वास्तविकता होइन । चिकित्सकका अनुसार तालु २ प्रकारले खुइलिन्छ । सिकाट्राइसियल र नन–सिकाट्राइसियल ।सिकाट्राइसियलमा जन्मजात समस्या, सुन्निएको अवस्था, कोठी , चोटपटक वा क्यान्सरका कारण तालु खुइलिने हुन्छ ।त्यस्तै नन–सिकाट्राइसियलमा कहिलेकाहि सानो भाग मात्र खुइलिन्छ भने कहिले पूरा भाग नै । खुइरे भनिने सानो भाग खुइलिने रोग वंशाणुगत गुण, मानसिक रोग वा ढुसी संक्रमणका कारण देखिन्छ । त्यस्तै पूरा भाग चाहिँ एलोपेसिया युनिभरसालिसका कारण खुइलिने हुन्छ ।पूरा भाग खुइलिएपछि रौंका जरा नष्ट हुन्छन् । जसको कारण कपाल पलाउन सक्दैन र तालु चिल्लो देखिन्छ । नन सिकाट्राइसियल रोगमा रौंका जरा हुने भएकाले पुनः पलाउन सक्छन् ।कपाल समयपूर्व नै झर्नु आजकाल सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सम्बन्धमध्येको एक हो । कपाल झर्नुका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छ जसमा रोग र बंशानुगतका साथै खानपिन पनि समावेश छन् ।
लोकपथ डटकमले एजेन्सीको आधारमा यहाँ केहि खानेकुराको नाम संकलन गरेको छ । जसको अत्याधिक प्रयोगले तालु खुईलिने समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ । पेस्ट्रीज र केक :यसमा हुने मैदा र चीनिले एन्ड्रोजन हर्मोनको स्तबर बढाउँछ । यसले तीव्र रुपमा कपाल झर्छ तारेका खानेकुरा :यसमा अत्यधिक तेल हुन्छ जसले टाउकोको कपालको प्वाल बन्द हुन्छ जसका कारण कपाल तीब्र रुपमा झर्ने गर्दछ ।.रिफाइन्ड फूड :
सेतो पाउरोटी, पास्ताजस्ता खानामा पाइने स्टार्च चीनीमा परिवर्तन हुन्छ जसले कपाल पातलो हुन थाल्छ ।. आलू :यसमा स्टार्चको मात्रा अत्यधिक हुन्छ जसले इन्सुलिनको स्तरलाई बढाउँछ र कपाल धेरै झर्छ । पिज्जा :यो खाँदा रगतमा चीनिको मात्रा बढ्छ । यसले हेयर फोलिकललाई खुम्च्याउँछ र कपाल धेरै झर्ने गर्दछ । फ्रेन्च फ्राइ :यसमा धेरै तेल र ट्रान्सफ्याट हुन्छ जसले कपालको जरालाई पोषण पाउन दिँदैन । मिठाई : यसले ब्लड सुगर लेभल बढ्छ जसले हेयर फोलिकल्स खुम्चिने गर्दछ र कपाल झर्ने गर्दछ ।कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स :सोडा, कोलाजस्ता ड्रिङ्क्समा अत्यधिक चीनि र एसिडिक क्वालिटी हुन्छ । यसले कपाल धेरै झर्छ ।रक्सी : यो पिउँदा शरिरमा जिंकको शेचन स्लो हुन्छ जसले कपाल अत्याधिक झर्छ ।स्रोत लोकपथ
Tagged Challenge nepalकपाल खुइलेकोकपाल झरेकोच्यालेन्ज नेपाल
January 13, 2021 January 23, 2021 challengenepal